[17 / 02 / 2020] Aqoon-isweydaarsiga Gaadiidka Antalya 19-kii Febraayo	07 Antalya
Maalinta: Diseembar 23, 2017
KTU Loogu Talagalay Tababarka Taabashada ee Isticmaalka Madaarada Tareenka
Professorka kuliyadaha injineerinka ee KTU iyo Dean ee kuliyada injineerinka ee jaamacada Giresun. Dr. Kooxda mashruuca ee uu hogaaminayo Gençağa Pürçek waxay dejiyeen khad tareenka loogu isticmaali karo Wadada Subway. Waxa ay muujinayaan [More ...]
IGA, 3. ayaa u sheegay garoonka diyaaradaha ee filimada soo bandhigay
Maareynta Diyaaradaha ee IGA Airport Inc. Markii la soo bandhigay muuqaalka animation 3D, mashruucii ugu weynaa ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ayaa la soo gabagabeeyey. 29 Oktoobar 2018 ayaa loo qorsheeyay in la furo iyo dhammaan wejiyada [More ...]
Bozankaya Samee aaladda baska korantada
Xaqiijinta mashaariicda badan ee soo saarista gawaarida gaadiidka dadweynaha ee korantada Bozankaya A.Ş. waxay kaqeybgashay Bandhigii Seddexaad ee Ankara. Isaga oo ka hadlaya xafladda, isu keenaya magacyo dhiirrigelin iyo fikrado sumad leh [More ...]
Baaritaanka badda ayaa ka bilowda Channel Istanbul
Adiga oo dhigaya boodhadhka boonada laga soo galo ee Istanbul meel u dhow dekada Karaburun lugta Badda Madow iyo Badda Marmara ee dhanka Küçükçekmece Lake waxay xoojineysaa suurtagalnimada in marinku ka gudbo markan. Badda Madow oo ku dhex jirta baaxadda Sahannada, Naqshadeynta iyo La-talinta adeegyada mashruuca qarnigii [More ...]
Tramway Arrimaha u dhaxeeya Maalka iyo Alsancak
Marka la eego baaxadda Konak Tramway Works, 27 waxaa loo abaabuli doonaa sidii “onearşamba hal waddo” oo loo wajahayo Gazi trafik Konak trafik jiho ilaa iyo Diseembar Arbacada. Qeybta Cumhuriyet Boulevard ee udhaxeysa Gazi Boulevard iyo Fevzipaşa Boulevard [More ...]
Tilmaamaha Codbixiyayaasha ee Apaydin
TCDD 2018 si looga hadlo barnaamijyada tababarka adeega ee 91. Guddiga Tababarka, 22 Diseembar 2017, ayaa waxaa lagu qabtay Hotelka Prestige Thermal ee magaalada Ayaş, Ankara. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın Guddiga waxbarashada [More ...]
45 oo ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay Spain
Shil tareen ayaa ka dhacay caasimada Spain ee Madrid. Marka loo eego warbixinnada bilowga ah, dadka 4 ayaa si xun ugu dhaawacmay shilka. Shirkadda tareenka ee reer Spain ee Renfe ayaa sheegtay in shilka uu ka dhacay 45 waqtiga maxalliga ah. [More ...]
Booqo Gaadiidka Turkiga-Sen
Madaxa Ururka Caawinta Bulshada iyo Wadajirka (DEGÜVDER) iyo xubno ka tirsan Golaha Agaasimayaasha ayaa booqday Guddoomiyaha Gaadiidka Turkiga Şerafettin Deniz. Madaxweyne kuxigeenka Türk Ulaş-Sen [More ...]
Waxaa lagu daabacay Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul shabakadda internetka iyo taleefannada iOS / Android, kiniiniyada ayaa lagala soo bixi karaa majaladda teknolojiyadda ah ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'Tech Istanbul', ayaa biloowday nolosheeda daabacaadda. Laga soo bilaabo nidaamyada macluumaadka caqliga leh iyo xalka Degmooyinka, [More ...]
Maanta taariikhda: 23 December 1888 Haydarpasa-Izmir ...
Maanta oo ku taal Taariikhda 23 Diseembar 1888 Shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska oo laga leeyahay Ottoman oo ka shaqeysa wadada tareenka ee Haydarpaşa-İzmir ayaa la weydiistey inay gaarsiiso wadada tareenka Gobolka. Shirkadda ma aysan dooneynin inay qirto waxayna isku dayeen inay ka shaqeeyaan Ingiriiska. Raiisel Wasaaraha Ingiriiska Lodr ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta [More ...]
Aqoon-isweydaarsiga Gaadiidka Antalya 19-kii Febraayo